FAQ - somali
Applications for the fund are now closed. Sign up here to receive updates about future financial assistance.
Caawinta arjigaKuwa aan nahaySu'aalaha Mar walba La isweydiiyo Wacyigelinta jaalka
Su'aalaha Mar walba La isweydiiyo (FAQ)
Illaa iyo intee ayaan ka heli karaa Deeqdaan?
Waxaad codsan kartaa inaad heshid lacag bixinta tooska ah ee halka waqti oo $1,000 qofkiiba ilaa ugu badnaan $3,000 gurigiiba. Waxaad u heli kartaa lacagta sida jeega kaashiyeerka ama kaarka hadiyada(Visa kaar).
Yaa codsan karo?
Si aad u codsato deeqda gargaarka, waa inaad:
Ku nooshahay Washington
Ahaataa ugu yaraan 18 sanno jir
Ay si weyn kuu saameysay cudurka safmarka (sida shaqo luminta, aad qaaday fayraska, ama daryeeleysid xubin qoyska ah oo ku dhacay cudurka)
Aanan u qalmin helitaanka deeqaha sanduuqa faderaalka ama cayrtaa shaqo la’aanta sababo la xiriira xaaladaada soogalootinimo
Codsiyada waxaa lagu ogolaanayaa sida loo soo kala hormaro, maadaama deeqda guud ay xadidantahay. Waxaan mudnaanta siineynaa kuwa qabo baahiyada weyn.
Tani miyey ka duwan tahay sanduuqa gargaarka Seattle?
Haa. Seattle COVID-19 Sanduuqa Gargaarka Musiibada ee Muhaajiriinta waxaa loogu talagalay dadka ku nool Seattle. Sanduuqa Washington COVID-19 Muhaajiriinta Muhaajiriinta waxaa loogu talagalay qof kasta oo jooga Washington. Haddii aad ku nooshahay Seattle, waad dalban kartaa labada lacagood.
Waxaa ku codsan karta [link to application] luuqadaha: Shiinees, Ingiriis, Faransiis, Garifuna, Hindi, Koriyaan, Soomaali, Isbaanish, Sawaaxili, Tagaloog/Filibiino, Fiitnaamiis
Ka hor inta aadan codsan, waa inaad:
Isu keentaa aqoonsigaaga loo baahanyahay iyo dokumintiyada daganaanshaha. Dib ayaad uga eegi kartaa liiska qoraalada la ansixiyay immigrantreliefwa.org Xisaabi daqliga bil-laha isku celceliska qoyskaaga.
Taabo badhanka “APPLY” ee bogga codsiga kadib ku raadi badhanka “REGISTER” oo sameyso Akoonka SurveyMonkey Apply. Dhawr daqiiqadood kadib iska diiwaangelinta waxaad heleysaa i-meel aad ku xaqiijisid akoonkaaga. Fadlan hubi inaad xaqiijisid akoonkaaga.
Dhameystir dhammaan su’aalaha codsiga. Tani waxay qaadan kartaa waqtiga qaar. Waad keydin kartaa codsigaaga oo aad u soo laaban kartaa xili walba.
Markii aad ka dhammaatid arjigaaga hel badhanka cagaarka ee weyn ee “SUBMIT” si aad u gudbisid codsigaaga.
Kadib markii aad codsatid, fadlan hubi inaad fiirisid sanduuqa i-meelkaagaa ama galka i-meelka junk ee xaqiijintaada ah. Waxaad sidoo kale heleysaa xaqiijin fariin qoraal ah maalinta aad gudbisid codsigaaga. Waxaad dib u geli kartaa gudaha oo aad fiirin kartaa heerka si aad u aragtid haddii codsigaaga dib loo eegay iyo haddii lagu siiyay maalgelinta. Fadlan gudbi kaliya codsigaaga hal jeer.
Haddii aadan rabin inaad onleenka ama internetka ku buuxbuuxiso foomka codsiga ama arjiga deeqda, halkaan ayaad ka daabacan kartaa foomka codsiga ama arjiga deeqda, kadibna waxaad kusoo diraysaa boostada P.O. Box #84327, Seattle WA 98124
Haddii aad qabtid wax su’aalo ah, Waxaad soo wici kartaa Taleefanka Hay’da Sanduuqa Midnimada Soogalootiga Washington (WAISN) 1-844-724-3737. Taageerada waxaa la heli karaa maalin walba ka bilow 6 AM-9 PM, luuqado badan ayaadna ku heli kartaa.
Kadib markii aad codsatid, waxaad ku heleysaa aqbaaraha ku saabsan arjigaaga i-meel iyo farriin qoraal ahaan. Waa lagu soo ogeysiinayaa haddii arjigaaga la ogolaado 3 isbuuc gudahood. Haddii arjigaaga la ogolaado, waxaad ku heleysaa lacag bixinta 2 isbuuc gudahood.
Deeqaheena way xadidanyihiin, marka ma ahan in qof walba oo codsadaa u suurtogaleyso inuu helo gargaar waqtigaan.
Kuwaan waa dokumintiyada aad ku isticmaali kartid codsigaaga si aad u cadeysid aqoonsigaaga iyo daganaanshahaaga Gobolka Washington. Fadlan hubi inaad haysatid koobi cad oo midkood:
Hal shey oo Liiska A, ama
Min Hal shey oo Liiska B iyo Liiska C ah.
Kaarka Aqoonsiga Gobolka Washington oo muujinayo magacaaga buuxo iyo ciwaanka gobolka Washington
Leesinka Darawalnimada Gobolka Washington oo muujinayo magacaaga buuxo iyo ciwaanka Gobolka Washington
Kaarka aqoonsiga ardaynimo xiligaan dugsi ku yaalo Gobolka Washington
Biil / risiidka korontada oo muujinayo magacaaga buuxo iyo ciwaanka Gobolka Washington
Biilka mobeelka ama intarneetka oo muujinayo magacaaga buuxo iyo ciwaanka gobolka Washington
Bayaanka caymiska oo muujinayo magacaaga buuxo iyo ciwaanka gobolka Washington
Bayaanka bangiga oo muujinayo magacaaga buuxo iyo ciwaanka gobolka Washington
Risiidka Canshuur bixinta 2019 oo muujinayo magacaaga buuxo iyo ciwaanka gobolka Washington
Rasiidka lacag bixinta ee ka timid badrooniyada oo muujinayo magacaaga buuxo iyo ciwaanka gobolka Washington
Rasiidka kirada oo muujinayo magacaaga buuxo iyo ciwaanka gobolka Washington
Kaarka aqoonsiga ardayga oo dugsi walba ah
Baasaboor oo wadan walba ah
Leesinka Gaari kaxeynta Caalamiga ah
Kaarka Metro oo la jiro sawir
Warqad saxiixan ama taariiqeysan* oo sheegeyso magaca buuxo iyo lambarka qofka qorayo warqada ee ka timid shirkadaha soo socda:
Milkiilaha guriga oo qiraya daganaanshahaaga WA
Wakiilka ka socdo goobtaada cibaadada oo qiraya daganaanshahaaga WA
Warbixinteyda miyay illaalsantahay?
Xogtaada marnaba ogolaanshaheena lagulama wadaagayo dowlada, ICE, hayadaha fullinta sharciga, milkiilahaaga guriga aad dagantahay, badroonigaaga, ama qof kale. Warbixinta oo dhan waxaa loo keydinayaa si illaalsan qaabka koodh leh marka lama geli karo.
Sida waafaqsan heshiiska aan la galnay Gobolka Washington, dadka kaliya ee heli karo warbixinta shaqsiga codsadaha ah waa Scholarship Junkies (hay'ada bulshada ee maareeyo deeqda), Hayada Fair Work Center iyo Ururka Deynta Seattle (ee qeybiso lacag) . Lama wadaageyno warbixintaada qof kale. Laakin haddii ay jirto codsi maxkamada sharciga, waxaan si sharci ah ugu baahan karnaa inaan siideyno warbixinta shaqsiga. Uma badna tani inay dhacdo laakiin waa suurtagal.
Sidee ayaa deeqda loo maamulaa?
Deeqda waxaa maamulo hay'adaha bulshada soogalootiga ay hoggaamiyaan ee Washington—isla dadka u ololeeyey aasaasida Deeqdaan. Waxaa taageera, Lacagtana bixiya Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka Gobolka Washington.
Miyaa lacagta ka imaaneyso deeqda iga celineysaa inaan helo fiiso ama kaarka cagaaran mustaqbalka sababtoo ah sharciga dallacaada bulshada?
Maya. Caawinta ka imaaneyso deeqdaan waxaa loo tixgeliyaa caawinta gargaarka masiibada halka waqti, loomana tixgalinayo sida waafaqsan sharciga dallacaada bulshada. Helitaanka caawinta deeqdaan waa inaysan saameyn heltaankaaga karaka cagaaran.